Canyon View Cottage eduze kwasePortal, AZ
Portal, Arizona, i-United States
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Joy
Leli yindlwana ethokomele yekamelo elilodwa elinebhavu (ishawa) elilala ngokunethezeka amabili phezu kombhede ongangendlovukazi. Isiqandisi esincane, i-toaster, i-coffeemaker (ikhofi/i-pods yetiye, isikhilimu noshukela ohlinzekwayo), i-dinnerware kanye ne-microwave kukuvumela ukuba ulungiselele ukudla okulula kanye nezidlo zasemini zepikiniki zohambo lwakho lokuya e-canyon nasehlathini lesizwe. I-wisteria embozwe ngaphambili kompheme inikeza indawo yokuhlehla / ukuphumula ngokubukwa kwezintaba ezizungezile.
Sigonywe ngokugcwele futhi sikhuthaza izivakashi zethu ukuthi zifane.
Sitholakala kumakhilomitha angu-4.5 ukusuka ePortal, AZ, eCave Creek Canyon (asikho eSan Simon). I-Southwestern Research Station ye-American Museum of Natural History ingumakhelwane wethu njengoba kuyiHlathi Lesizwe laseCoronado elizungeze indawo yethu ezinhlangothini ezintathu. Ukuphakama kwethu kungu-5500’ ngakho-ke ngokuvamile siba ngama-degree ayi-10 noma ngaphezulu apholile kunesigodi esingezansi. Umzila kazwelonke wehlathi ugijima eduze komugqa wendawo yethu futhi uwukufinyelela okuphelele kokuthola izilwane zasendle zethu: izinyoni, amabhere, ama-coatimundi, amaringi, njll.
5.0 ·85 okushiwo abanye
UJoy Ungumbungazi ovelele